Ukuthuthukiswa kokufunda: amathuluzi (wamahhala) okufanele uwasebenzise, ​​izinga ngeleveli - Ukuqeqeshwa Okuqondayo
Ulapha: Ikhaya » Izihloko » I-DSA » Ukuthuthukisa ukufunda: ngamathuluzi (wamahhala) okufanele uwasebenzise, ​​izinga ngalinye
Eminyakeni yamuva nje senze amathuluzi amaningi wamahhala wokuthuthukisa ukufunda. Kulesi sihloko sizama ukwenza i-oda elithile ngokukhombisa, esigabeni ngasinye, amathuluzi afanele kakhulu. Sinqume ukulandela indlela kusuka ezinhlamvwini eziya esigabeni esiphakanyisiwe ocwaningweni oluthakazelisa kakhulu olusanda kukhishwa ngu-squicciarini nabanye (Dyslexia, vol. 3, 2019), engeza kusiphakamiso sabo amathuluzi ethu wokwenza imisebenzi. Ukuze sijwayeze ukutadisha kwabo ngezindlela nangemiphumela, kepha-ke sikudlulisela ekufundeni i-athikili.
IDEA: Njengoba kusikiselwe ku-athikili ngu-squicciarini nozakwabo, osekukhulunyiwe, ezingeni lezinhlamvu ungasebenzisa inqubo yokufundisa Precision, ukudala umucu wezinhlamvu ozowufunda ngemizuzwana eyi-15, kudlulela kokulandelayo kuphela lapho okwedlule sekufundwe ngaphandle kwamaphutha. Kuqala, izinhlamvu ezidideka ngokubonakalayo nangokwethonya kwezwi zizogwenywa, khona-ke lezi zingeniswa bese, ekugcineni, izinhlamvu eziphezulu nezincane zingahlanganiswa.
TOOLI: Esigabeni sokuqala kungaba wusizo ukuhlela izinhlamvu zibheke, futhi ngokwenza lokhu ungakha uhlu lwezinhlamvu Funda iTachistoscope bese ucindezela inkinobho ethi "Dala uhlu ku-Pdf". Ngokuqondene nezinhlamvu zesibuko, uhlelo lungasiza Ukucinga Solver (ngokubeka "izinhlamvu zesibuko" kuzilungiselelo) noma, ngendlela edlalayo, Hawkeye.
IDEA: Imisebenzi yokuhlonza nokufunda ama-silabhula ngokuhlukahluka okukhulu, kancane kancane ikhulisa ubunzima: I-CV - VC - CVC - CCV - CCVC - CCCVC.
IMIYALO: Ungahlala uyisebenzisa Funda iTachistoscope evumela ukwakhiwa kwezinhlu ezivumelanayo noma, ukulawula okungaphezulu kwamapharamitha, I-SearchSolver. Ngaphezu kwalokho, ku- Umakhi wekhadi le-PDF, uzothola ama-barrage amaningi afanayo kanye nemisebenzi yokusesha evumayo ngaphakathi kwegama noma umucu wezinhlamvu.
Ungase futhi ube nentshisekelo ku: Ubufakazi bokusebenza ngempumelelo kwe-tachistoscope ekuthuthukiseni ukufunda
Kusuka kumaqoqo ezinhlamvu kuya kumagama (i-syllabic fusion)
IDEA: Ukusuka kuma-sillies afundwe engxenyeni edlule noma, uma ingane isivele yazijwayela ama-syllables, ungadlala imidlalo yokuhlanganisa amagama abhaliwe namagama wokufunda ngesakhiwo sesilabhasi esandayo.
IMIYALO: Ukuvumelanisa ngokuvumelanisa ikuvumela ukuthi ubonise amagama ucezu olulodwa ngasikhathi, ugcine okusekusobala noma kucacile. Ngokubeka ijubane lokuvezwa kungenzeka ukwandisa ubunzima bomzimba. Ikhodi eyimfihlo ikuvumela ukuthi udlale ukuze wakhe kabusha igama ngokuhlanganisa inombolo ekuvumelaniseni ngakunye futhi wakhe igama kabusha ekugcineni. In Ukufundwa kwe-GameCenterfuthi, uzothola imidlalo yokuqedela evumelana ne-syllable, ngamagama e-bisyllabic (I-CV yokugcina), trisyllabic (I-CVC yokuqala, I-Median CV e I-CV yokugcina).
Amagama aphelele (isigaba se-lexical)
IDEA: Ukungenelela kwe-lexical kususelwa ekufundweni kohlu lwamagama noma esethulweni sabo esibekelwe isikhathi.
IMIYALO: Funda i-Tachistoscope, nokuguquguquka kwayo okukhulu kuhlu lokwakha nasekusethweni kwamapharamitha, iyithuluzi eliphambili kulesi sigaba. Ngaphezu kwalokho, kunika ithuba lokuphrinta uhlu olusanda kukhiqizwa ngefomethi ye-pdf, ukuvumela ukuthi usebenze ekubonisweni kwesikhathi kanye nokufunda uqobo.
IDEA: Thuthukisa ukufunda ezingeni lemisho ngenkathi usebenza ukuqonda okufundwe.
IMIYALO: Izinsabula (umsebenzi 1 - umsebenzi 2 - umsebenzi 3) ingaba yindlela ejabulisayo ne "yemvelo" yokusebenza ngemisho. Umdlalo esiyela kuhlanganisa imisho yokufunda nokugcina imininingwane kwimemori.
IDEA: Isigaba sokugcina, inhloso yangempela yokufunda, ukuthola ukuqondisisa nokuqonda izindima. Ngempela kunenzuzo ukwenza lolu hlobo lomsebenzi ngemibhalo evusa isasasa kumfana / entombazaneni.
Ungase futhi ube nentshisekelo ku: Okuphindwe kabili: kungani sinephutha nokuthi yini esingayenza ukuthuthuka
IMIYALO: Uhlelo lokusebenza lewebhu Tachibrano ikuvumela ukuba unamathisele umbhalo futhi usethe amapharamitha ahlobene nesivinini sokuskena nohlobo lwesibekisombhalo okufanele sisetshenziswe egameni, ngaphezu komphumela wokubonisa wezinto zonke. Ekugcineni, ekufundeni kwe-GameCenter, uzothola amathrekhi ama-4 (Umnsalo - Umcibisholo - Umgomo - Isikhundla) lapho inhloso ukuthola igama elilahlekile. Umsebenzi odinga kakhulu, ohlanganisa nengxenye eguqukayo, ngukufunda ezinye izindatshana, lapho izindinyana ezimbili zemibala ehlukene zihlanganiswa ngokushintshana kwamagama ngamunye. Ungakha ezinye izingoma ngohlelo lokusebenza lwewebhu.
Ekugcineni, ku- I-GameCenter Ukufundwa uzothola inqwaba yeminye imidlalo yokwakheka kwegama, ukuhlangana kwamagama / isithombe nesinqumo esipelingi, kanye nama-puzzle angamagama angamaphazili kanye nama-crossword puzzle!
I-squicciarini, uNicoletti noStella (2019), Ukufundiswa kabusha kokufunda ngokusekelwe ebufakazini besayensi: kusuka ku-sublexical to lexical, I-Dyslexia vol. 16, n.3
Inkambo yethu online "Ukuqinisa i ...
Ukunikwa amandla okukude ku-dyslexia.…
Kuhlanganiswe inkumbulo yomsebenzi ehlanganisiwe kanye ...
dyslexia, DSA, mahhala, Ukufundwa, oluqinisayo, ukuthuthukiswa kokufunda kwamahhala, isofthiwe yokufunda yamahhala, ukwelashwa
Ukuthuthukisa ukufunda: ngamathuluzi (wamahhala) okufanele uwasebenzise, ​​izinga ngalinye2020-05-122020-05-16http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngUkuqeqeshwa kwengqondohttp://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2020/05/lettura.png200px200px
Ukunikwa amandla kwebanga ku-dyslexia. Thuthukisa ukufunda ngaphandle kokufundaImibhalo, i-DSA, Ukuvuselela, Ukwelashwa
Inkambo yethu online "Ukuthuthukiswa kokufunda" kuyasebenza!I-DSA